अप्रिल २१ को दिन थियो, कामबाट आएपछि उहाँको मलिन अनुहार, रातो–रातो आँखा देखेर मलाई डर लाग्न थाल्यो ।(पुरा पढ्नुहोस) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > अप्रिल २१ को दिन थियो, कामबाट आएपछि उहाँको मलिन अनुहार, रातो–रातो आँखा देखेर मलाई डर लाग्न थाल्यो ।(पुरा पढ्नुहोस)
admin May 21, 2020 May 21, 2020 जीवनशैली, रोचक, समाज	0
जताततै विश्वलाई नै त्रसित बनाउने प्राणघातक भाइरस कोरोनाकै चर्चा छ । हामी सपरिवार यूएईको अबुधाबीमा बस्छौं । मेरो श्रीमान (भेषराज ढकाल) को जागिर अस्पतालमा थियो । यहीक्रममा सुरु भयो कोरोना नामको महामारीको संसार यात्रा ।
गत अप्रिल १९ तारिखसम्म उहाँ काममा जाने आउने गर्दै हुनुहुन्थ्यो । एकदिन उहाँलाई हल्का रुघा लागेजस्तो, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, घाँटीमा केही अडकिएको जस्तो हुन थाल्यो । त्यति हुँदा पनि सिटामोल खाँदै काम गरिरहनु भएको थियो । २१ अप्रिलको दिन थियो । कामबाट आएपछी उहाँको मलिन अनुहार, रातो–रातो आँखा देखेर मलाई डर लाग्न थाल्यो ।
अनि रातीको १० बजे कराउँदै हस्पिटल लिएर गएँ । एक्स रे गरियो, इसिजी गरियो, ज्वरो र रक्तचाप र स्वाब जाँच भयो । त्यसपछी घर फर्कियौं । अस्पतालले उहाँलाई १४ दिनको विरामी विदा दियो । अस्पतालले २४ अप्रिलमा फोन गरेर सबै विमारको विवरण माग्यो र तपाइँलाई कोरोना संक्रमण भएको छ भन्ने जवाफ दियो । उहाँ अस्पतालकै कर्मचारी भएकोले घरमै बस्ने कि अस्पताल जाने भनेर सोधियो । उहाँले म लगायतका परिवारका सदस्यको सुरक्षाको निम्ति पनि अस्पतालमा नै बस्छु भन्नु भयो । आफैले काम गर्ने अस्पतालमा फोन गरेर इञ्चार्जलाई खबर गर्नु भयो । बेड व्यवस्थापन गरेर कार्यालयबाट फोन आएपछी आफै अस्पताल गएर भर्ना हुनुभयो ।
युएई हेल्थ ल अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेको ४ दिनपछी उहाँको स्वाब जाँच भयो । त्यसपटक पनि पोजिटिभ नै आयो । त्यसपछी उहाँले दैनिक ३०–४५ मिनेट ब्यायाम गरेर शरीर तताउने, पर्याप्त मात्रामा पकाएको अदुवाको पानी सेवन गर्ने, विद्युतीय भाँडोमा पानी तताएर त्यसको तातो बाफ लिने र भिटामिन सी युक्त जस्तैः कागती, सुन्तला, आँप जस्ता खाने कुराहरुमा जोड दिनु भयो । खानामा प्याज, जस्ले मिठो निन्द्रा लगाउँछ, लसुन, जस्ले पाचन प्रणालीमा सहयोग पुर्याउँछ, त्यसको प्रयोग बढाइयो । उहाँको अर्को जाँच मे ७ मा भयो ।
अब उहाँको कोरोना रिपोर्ट सर्लक्कै नेगेटिभ आयो । उहाँ खुशीले हाम्फाल्दै घर आउनु भयो । फेरि मे को १४ मा अर्को जाँच गरियो । त्यसको नतिजा पनि नेगेटिभ नै आयो । त्यसपछि उहाँ पूर्णरुपमा आफ्नो दैनिकीमा फर्किनु भयो । मेरो श्रीमानले आत्मबल र आत्म विश्वासकै कारण कोरोनाई जित्नु भएको हो भन्ने मलाई लागेको छ । खानपानमा ध्यान दिने र ब्यायाम गर्ने आफूलाई कमजोर नठान्ने र म कोरोनालाई जित्छु भन्ने ठानेर मनोबल ठूलो बनाउने गर्नुस् । यति गरेमा सामान्यतया कोरोनालाई जित्न सकिन्छ ।
त्यसकारण उहाँलाई कोरोना निको बनाउन सफल केही कुराहरु यहाँहरुको लागि लेख्छु ल ।
१) पानीमा अदुवा पकाएर मह र कागती राखेर खानु होला । २) दैनिक सामान्य शारिरीक ब्याम गरेर शरीरलाई तातो राख्ने गर्नुहोला । ३) चिसो खाने कुरा विल्कुल नखानु होला । ४) प्याज, लसुन र घरमा पाइने गरम मसलाहरु प्रयोग गर्ने गर्नुहोला । ५) ४–५ पटक पानी उमालेर बाफ लिने गर्नुहोला ।
६) मनोवल कमजोर हुन नदिनुहोला । ७) मास्क प्रयोग गर्ने अनि जताततै थुक्ने काम नगर्नु होला किनकी कोरोनाको बिमारीको थुकबाट निस्किने जिवाणु हावा मार्फत् सजिलै अर्को ब्यक्तिमा सर्न सक्छ । ८) तातो झोलमा गरम मसला प्रयोग गरेर पिउनाले चिटचिट पसिना आउँछ तर हाम्रो शरीर तात्नु नै भाइरसलाई कमजोर पार्नु हो ।
९) हौसला बढाउन आफ्ना–आफन्तसँग कुरा गर्ने, मनोरञ्जन भएका चलचित्रहरु हेरेर आफूलाई मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त बनाउनाले कोरोना धेरै चाँडो निको हुन्छ ।
नेपालकाे नयाँ नक्शा मान्दैनाै भनेपछि गगन थापाले दिए भारत सरकारलाई कडा जवाफ!
यि दिदी, जसले राति बालिकालाई लुकाएर जोगाइन्, उनैले खोलिन् घटनाको नयाँ रहस्य ! बालिकाको दर्दनाक अवस्था – भिडियो सहित हेर्नुहोस